Baro Sida Loo Soo Kasbado Saaxiibka Wanaagsan - Daryeel Magazine
Baro Sida Loo Soo Kasbado Saaxiibka Wanaagsan
Saaxiibku waa qofka inta badan noloshaada kugu lammaan. Saaxiibku amma saaxiibtinnimadu ma aha, mid ku xidhan; da’, midab iyo qabiil amma jinsi laakiin waxa muhiim ah inaad diinta Islaamku siday kuugu tilmaantay saaxiibka wanaagsan aad ku raacdo.
Saaxiibku waa lagama maarmaan inta aynu nool nahay. Inaad saaxiib heshaana, waxa ay ku xidhan tahay, badiba shakhsiyaddaada. Sidoo kale waa in uu qofku si fiican u fiiriyaa, cidda uu saaxiib ka dhiganayo, waayo isaga ayaa marna jannada kugu leexiya marna cadaabta kuu jiita. Haddaba Saaxiibnnimada bini aadamku, waa inay leedahay qiimo, qaddarin, ixtiraam, daacadnimo, xafidaad, ku dayasho, caawimo iwm.
Ilaahay waxa uu quraankiisa ku sheegay; suuratul Furqaan, aayadda 26 ilaa 29:
Haddaba hal su’aal ayaa meesha taalla: Maxaa laba qof iskugu keena kana dhiga saaxiibbo aad iskugu wanaagsan?
1. Waxbay wada xiiseeyaan: Markay jirto dan guud amma xiiso guud aad qof kale wada xiisaynaysaan, sida kubbadda cagta, filim, heeso, amma xiiso kale waxa dhalan doonta inaad wakhti wadaagtaan idinkoo qabanaya, wax aad xiisihiisa ka simantihiin.
2. Taariikh midaysa: Xusuusta dheer iyo waayaha dhibaatada badan ee labada qof soo wada mareen ayaa xidhiidhka saaxiibtinnimo adkeeya.
3. Mabaadi’ midaysan: Inkasta oo aanay ahayn baahi qasab ah, laakiin marka aanay kala duwanayn mabaadi’du ama isku mid yihiin, aadbay u xoojisaa xidhiidhka saaxiibtinnimo.
4. Sinnaansho: Labada saaxiiba midkood markay baahidiisu badato waxay dareen gelinaysaa, inuu saaxiibka kale kaa maarmi karo. Waa inay laba qof ka dhaxaysaa sinnaansho oo labaduba isku baahan yihiin.
.Waa maxay sifaadka qofka ka dhigaya saaxiib dhab ah?
1. Farxaddaaduu ku farxaa, dhibaatooyinkaagana wuu ka xumaadaa.
2. Xidhiidhkaaga goyn maayo markaad is khilaaftaan.
3. Waa qofka aad si xadka ka baxsan ugu kalsoontahay.
4. Waa qofka markasta taageero kula garab taagan, sharaftaadana ilaaliya markay dadku ku xantaan.
Gaandhi ayaa idhi “Be the change you wish to see in the world” oo ka dhigan noqo isbeddelka aad doonaysid inaad ku aragtid adduunka. Markaa waxaan ku leeyahay sii noqo saaxiibka aad doonaysid inaad yeelato, waxaan uga jeedaa, yeelo sifaadka aad ka doonaysid inuu saaxiibkaa yeesho. Waxa xaqiiq ah inay isa soo jiitaan dadka isku sifaadka ah. Ha isku yeelin sifaad aad is leedahay dadka kale ayaa jeclaan, naftaada daacad u noqo cidna ha iska dhaadhicin.
1. Waxoogaa wakhti ah la wadaag dadka aad isku meel ka shaqaysaan ama isku meel ka dhigataan ama aad isku meel maalin kasta iskugu timaaddaan.
2. La sheekayso dadka aad mar kasta is aragtaan.
3. Ku biir naadiyada la iskugu yimaaddo, sida ciyaaraha, naadiyada wax akhriska ah, ama kuwa kale ee aad aragtid.
4. Tilifoon ka garaac ama farriimmo u dir dadka cusub ee aad la kulantay, adigoo xaalkooda ka waraysanaya.
5. Diyaar u noqo inaad ka dhagaysatid markay doonayaan inay dhibaato ay marayaan kaala hadlaan.
6. Noqo qof furfuran oo dhoollacaddayn badan.
7. Si diirran dadka aad maalin kasta la kulantid ula hadal oo soo dhawee.
Culimada ku takhasustay cilmiga bulshadu waxay yidhaahdaan “horumarka qofku uu noloshiisa ka gaadho, waxaa sal u ah boqolkiiba in badan, qaab la dhaqanka iyo xidhiidhka uu la leeyahay dadka iyo bulshada halka boqolkiiba waxyari ay tahay xirfadaha/aqoonta cilmiyeed ee uu leeyahay waxay doonto ha ahaatee.
vMurtida iyo Suugaanta Soomaalidu kamay gaabsan saaxiibka;
Saaxiibku waxa uu ahaa
Barshadaadu ruux ay seeggan tahay
Ka xogta siiyee
Siday tahay u sifeeya
Muraayad sawirkaaga iyo
Waxaad tahay sal iyo baar
Samuuradda laga akhriyo
Sifaha dhaqankiyo akhlaaqda
Saldhigga garashada iyo caqliga
Sii ba aragtida fog iyo
Saadasha uga muuqataan.
Nimco Maxamuud Axmed
Baro Sida Loo Diyaariyo Doolshe Somali Casriyaysan Sida Loo Dhiso Hadafka Sidee Loo Noqdaa Arday Wanaagsan Oo Guulaysta? Sida Loo Helo Farxada Nolosha